Isizinda somkhiqizo siyisihluthulelo sempumelelo kwebhizinisi lakho. Lokhu sekuqinisekisile izigidi zamabhizinisi emhlabeni jikelele. Isikhala esivumelanayo sichaza izimo zayo ebhizinisini lebhizinisi, elisebenza ngaphansi kwemithetho ehlukile kunemakethe esemqoka ekhona ngokomzimba. Ubunikazi bomuntu siqu yisici esibalulekile somsebenzi wezamabhizinisi, lokhu kuyisisekelo salokho akwenzayo.
Ukugqugquzela iwebhusayithi esemthethweni ye-corporation njengenye yezinkomba zokuthuthukisa nokuthuthukisa ibhizinisi layo emakethe amasha ezweni lanamuhla akuyona nje ithuba, kodwa futhi nesidingo esikhulu sokufeza impumelelo yenkampani. Ngakho-ke, kufanele uhlele ngokucacile isu lokuzikhuthaza esikhaleni esiphezulu. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuqaphela ukuthi kungani ufuna ukungena ezimakethe ezibonakalayo, ngalokho okuya kumaklayenti akho amasha angakhona nokuthi uzohambisa kanjani umyalezo wakho.
Enye yezinketho zokuthuthukisa ibhizinisi kwi-intanethi ukudala iwebhusayithi esemthethweni esekelwe kwisizinda somkhiqizo. Udala brand yakho siqu, okuzocaciswa ngokucacile nemisebenzi yakho. Ukusebenzisa isizinda somkhiqizo, uvula insimu yokukhuthazwa kwalo mkhiqizo, ukutholakala okuhlala njalo kwenkambu yolwazi. Ukudala umkhiqizo wakho, udinga ukulungele ukuthi kufanele utshale imali eningi kakhulu, futhi wenze umzamo omkhulu nomsebenzi.
Kodwa kukhona enye indlela yokuthuthukisa ibhizinisi lakho. Isekelwe kwinethiwekhi. Isekelwe ekutheni uthole indawo yesizinda, okwenza kube lula ukusebenzisa wonke amathuba omkhiqizo ovele usekhona. Esikhundleni sokusebenzisa imali nemizamo yokudala umkhiqizo wakho, kuneziphakamiso zokuthengisa umkhiqizo olungiselelwe, ongayisebenzisa ngokugcwele. Lawa mathuluzi namakhono, kulokhu, ungasebenzisa ukufeza izinga eliphakeme lezokuthuthukiswa esiteshini elikunika umkhiqizo ovele usunguliwe futhi othuthukile.
Ngakho-ke, uma ufuna ukuqhubekela phambili kwi-Intanethi njengesihloko esizimele futhi esanele ngokwamanye emakethe, kufanele ucabange ngethemba lokuthenga isizinda somkhiqizo. Lokhu kuzovula amathuba amakhulu okuthuthukiswa, futhi kuzohlinzeka ithuba lokulondoloza inani elikhulu lemali nemizamo engayenza ekudaleni umkhiqizo. Uma usuwutholile umkhiqizo olungiselelwe, kuzoba lula kuwe ukudala umqondo wokuthuthukiswa nokubeka isikhundla, ngesisekelo salowo mithombo ongayithola.
Kuyini ukuduma nokunyazima kombani?